thinzar's blog: သူငယ်ချင်းသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
စာမေးပွဲ တွေလည်း ပြီးသွားပြီ။ အောင်စာရင်းလည်း ထွက်ပြီ။ ကျောင်းတွေလည်း ပိတ်ပြီနော်။
ကျောင်းလေးနှစ် တက်ခဲ့တာ မှတ်မှတ်ရရ တို့တွေ စသိခဲ့တာ second year မှာပေါ့။ နင်စပို့ခဲ့တဲ့ “ဒီတစ်ပါတ် public speaking အတန်း ရှိလား” ဆိုတဲ့ sms က ငါတို့ခင်မင်မှုရဲ့ အစဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ အဲဒီတုန်းက ထင်မထားခဲ့ဘူး။ လူတွေနဲ့ သိပ်စကားပြောလေ့ မရှိလို့ ငါ့မှာ သူငယ်ချင်း များများ စားစား မရှိဘူး။ အဲဒီsemester က database အတန်းကနေစပြီး နင့်ကို သတိထားမိခဲ့တယ်။ ဉာဏ်အရမ်းကောင်းပြီး စာကြိုးစားတဲ့ နင့်ကို ကြည့်ပြီး စာကျက်ရမှာ ပျင်းတဲ့ ငါ.. စာကြိုးစားချင်စိတ် ပေါက်လာခဲ့တယ်။ နင့်ရဲ့ ခုံနံပါတ်ကို အလွတ်ကျက်ပြီး အမှတ်စာရင်းထွက်တိုင်း ကြည့်ခဲ့တယ်။ (နင်လည်း အမှတ်စာရင်းရရင် ငါ့စာရွက်ကို အနောက်ကနေ မရရအောင် ကြည့်နေတယ်ဆိုတာ ငါသိပါတယ်။) ဘယ်သူ့ထက်မှ မသာရင်နေ.. နင့်ထက် ဝ.၅ မှတ် လောက် ပိုရင်ဘဲ ငါကျေနပ်နေမိတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး နင်က ငါ့ရဲ့ inspiration ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောရင် နင့်ယုံမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ငါသိတယ်။
နင်နဲ့ တူခဲ့ဖူးတဲ့ class တွေကို အတိအကျ မမှတ်မိတော့ ပေမယ့် နင်ရှိတဲ့ အတန်းတိုင်းမှာ ငါပိုပြီး စာကြိုးစားဖြစ်ခဲ့တာတော့ အမှန်ဘဲ။ အဲဒါ မနာလိုတဲ့ စိတ်နဲ့တော့ မဟုတ်ဘူး။ သူတောင် ဒီလောက် ရရင် ငါဘာလို့ မရနိုင်ရမှာလဲ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့လေ … အထူးသဖြင့် network and system administration အတန်းမှာပေါ့။ Computer Science မှာ အတန်းတွေ တက်လာတာ အဲဒီအတန်းလောက် ဘယ်တုန်းကမှ စိတ်မပျက်ဖူးဘူး။ networking အခြေခံ ကောင်းကောင်းမရှိခဲ့ဘဲ အတန်းထဲ ရောက်တာနဲ့ တစ်ခါမှ မသုံးဖူးတဲ့ Linux မှာ ဆာဗာထောင်ခိုင်းတော့ လဲသေချင်စိတ်တောင် ပေါက်သွားတယ်။ network အကြောင်းကို စီကာ ပါတ်ကုံးပြောနိုင်တဲ့ နင့်ကို အားကျပြီး စာတွေ အများကြီး ဖတ်ဖြစ် ခဲ့တယ်။ အရင်က networking ကို သေမလောက် ကြောက်တဲ့ငါ advance networking ကို elective အနေနဲ့ ယူဖြစ်ခဲ့တယ်။ နောက်တော့ အတန်းတူတိုင်း ငါတို့ group project တွေ အတူတူ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်နော်။ မဟုတ်ရင် free-rider တွေကြောင့် စိတ်ညစ်ခဲ့ရပေါင်းလည်း မနည်းတော့ဘူး။
နင့်ကို တစ်ခြားသူတွေထက် ပိုခင်တဲ့ အချက်ကတော့ တစ်ကျောင်းလုံးမှာ sms ပို့လိုက်ရင် ချက်ချင်း ပြန်တဲ့သူဆိုလို့ နင်တစ်ယောက်ဘဲ ရှိလို့။ အမြဲ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း reply ပြန်ရလို့ တော်ရုံသိချင်တာဆို နင့်ကိုဘဲ မေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ နောက်ပိုပြီးလေးစားသွားတာကတော့ “Hard work is more important than excellence” ဆိုတဲ့ နင့်ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကြောင့်ဘဲ။ နင်က ဘယ်တော့ မှ end result ကို မကြည့်ဘူး။ စာမေးပွဲမှာ A ရရ Bရရ နင့်အတွက်က ကြိုးစားဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ အမြဲပြောခဲ့တာတွေက ငါ့အတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အားပေးစကားတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အမြဲကြိုးစားနေတဲ့ နင့်ရဲ့ time management လုပ်ပုံ တွေကို ကြည့်ပြီး အကြိမ်ကြိမ် အားကျခဲ့ရတာ နင်သိချင်မှ သိမှာ။ design အရမ်းတော်တဲ့ နင့်ကို အားကျပြီး web design တွေကို အားတဲ့အချိန်မှာ လေ့လာဖြစ်ခဲ့တယ်။
Industrial attachment လျှောက်ဖို့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ နင် အားပေး ကူညီ ခဲ့တာတွေကို ဘယ်တော့ မှ မမေ့ပါဘူး။ Every small little thing has meantalot to me.
ငယ်ငယ်ကတည်းကနေ အခုချိန်ထိ သူငယ်ချင်းဆိုတာ လက်ချိုးရေလို့ရတဲ့ ငါ့ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေထဲက သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့လို့ အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်တယ်။
နင့်ကြောင့် ငါ့ရဲ့ ကျောင်းသား ဘဝ ပိုပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ အမှန်ပါဘဲ။
Thanks for being my friend.. When I’m blessed withafriend like you, my memories are always worth treasuring.
~ သဉ္ဖာ ~
… ဆက်ပါဦးမည် …
မြန်မြန်ဆက်ပါဗျို့ စိတ်ဝင်စားနေပြီ...တန်းလန်းကြီးတော့ အကြာကြီးပစ်မထားနဲ့
27/11/07 10:30 PM
28/11/07 1:29 AM
နေလင်း>> ရေးစရာတော့ အများကြီးကျန်သေးတယ်။ ခက်တာက feel မလာဘူး ဖြစ်နေတယ်။ စိတ်ကူးပေါက်တဲ့နေ့မှ ဆက်ရေးတော့မယ်။ =)
မလေးမ >> ဒီလောက် ဖွင့်ထားတာတောင် ထပ်ဖောက်သွားသေးတယ် အစ်မရယ်။
28/11/07 10:18 AM
Yan Way Aung said...
bal thu lae? see git lar?:)
28/11/07 3:45 PM
ကိုရန်ဝေး >> ဟဟ.. ပြောပြဝူးကွ..:)
28/11/07 4:11 PM
ကောင်းခန်း ရောက်ရင် ကြော်ငြာဝင်ဒါပ ဲလား? ha ha
28/11/07 5:34 PM
hal tot. thu lal zan lan lay shi tar pal... he he.. sho htar tar.. hoon.. lu soe
28/11/07 6:29 PM
မောင်သက်>> ဟဲဟဲ.. ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဒါပါဘဲကွယ်။ တစ်ဝက်တော့ ဆက်လျှိုထား လိုက်ဦးမယ်။ =)
29/11/07 9:49 AM
Rapid KL 万岁!